Yonke into kulo nyaka inqabile, de kube ilogo ye-Osaka 2025 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-logo engaqhelekanga ye-Expo 2025 e-Osaka eJapan
Kukho ngamanye amaxesha apho iilogo ezithile ekubonakala ukuba azenzelwanga ukuba zimele i-Osaka 2025 World Expo. Yiyo le nto eyenzekayo kunye nelogo efanayo ye-Osaka 2025 esishiya sibhidekile xa sizama ukufumana uhlobo oluthile lokuvumelana kuyo.
Mhlawumbi kwisiphithiphithi eso ukuvelisa kunye nelogo enokunika imiyalezo emininzi okanye nanye. Mhlawumbi yile nto ufuna ukuyimela i-Osaka 2025 ye-World Expo, njengeSeville kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Ke sinokuthi kunjalo enye yeelogo ezinqabileyo ukuba asikaze siwubone umcimbi walolu hlobo; Kulungile uNaranjito okwiNdebe yeHlabathi yeHlabathi ngokuqinisekileyo wayenayo loo nto. Nangona apha ubuncinci ngokweefom inendawo yayo yale mihla.
- ?? (@ XkEL7NiSXE795tS) Agasti 26, 2020
Kwaye sithetha nge logo apho abanye iisetyhula ezimile okweqanda okanye kwitumato, banazo neenkcukacha zelo "mehlo" limhlophe elinelo phepha nalo lisetyhula. Kunqabile ngaphandle kwamathandabuzo.
Como ukuba kukho into eyenzayo kwaye okwangoku asazi ukuba yintoni. Inyaniso yeyokuba kusekho iminyaka emi-5 de kubhiyozelwe u-Osaka 2025, ke ngoko kusekho ilaphu elininzi lokusika; Kwaye le 2020 yesihogo ayikapheli.
Ngokwazi kwethu, oku Uyilo lukhethwe kumangenelo angama-5.984, ngoko ke kuqinisekile ukuba kuye kwafuneka baphule iintloko zabo ukuze bayikhethe, okanye esi sifo siyasichaphazela sonke singazi.
Lo mboniso I-Osaka ijonge ukusebenzisana nehlabathi ukudala uluntu apho wonke umntu anokufikelela kwiinjongo zakhe kwaye abonise amandla abo okwenyani. Ewe, nditshilo, siza kubona ukuba yonke into ihamba njani kude kube ngu-2025, okwangoku i-2020 iphela ... Ngelixa sizakubona ezi Iimaski zobuso ezingaqhelekanga nguBurker King.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-logo engaqhelekanga ye-Expo 2025 e-Osaka eJapan
Umsebenzi wokuyila kunye nekhadibhodi ye-Sunset Selfies silhouettes